सुन तस्किरीको ‘सेटिङ' नभत्काउदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीमाथि शंका - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सुन तस्किरीको ‘सेटिङ’ नभत्काउदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीमाथि शंका
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट गएको पुस २१ गते ३३ किलो सुन भित्रीयो । सबै सुरक्षाका घेरा पार गरेर अवैध रुपमा भित्रिएको १५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३३ किलो सुन अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छ । तर, भरिया पक्राउ गरे असलली सुन तस्कर को हो ? अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
जहाज चढाएर सुरक्षित रुपमा गन्तब्यमा पुर्याउने अन्तिम चरणमा सुन बरामत भयो । सुन तस्करीको सूचना जहाँबाट प्रहरीलाई आयो विमानस्थलमा हुने सेटिङका तारहरु खुस्किएर मात्रै सुन बरामत गरिएको हो । अवैध सुन आयातमा पक्राउ परेका गोपाल शाही, सन्तोष काफ्ले र दिनबन्धु थापालाई सीआइबीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भएको छ । संगठित अपराध पुष्टी भएमा १५ बर्षसम्म कैद हुनसक्छ । तर मुख्य अभियुक्त फरार छन् ।
विमानस्थलभित्र २०७१/७२ मा अवैध सुन बरामदका २२ घटना भएका छन् । त्यसमा १८ किलो ३ सय ९५ ग्राम सुन बरामद भयो। त्यति बेला २७ जना पक्राउ परे । ती पनि भरियाहरु नै थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको सुन बरामद गरेपछि धेरै रहस्यहरु खुल्ने क्रममा छन् । सुन तस्कर पक्राउ परे लगत्तै विमानस्थलको सुरक्षा चेक-जाँचमा रहेका अधिकारीहरुबीच एक अर्कालाई दोष लगाउन अग्रसर देखिएका छन् ।
‘नेपालको विमानस्थलबाट सजिलै हात्ति छिराउन सकिन्छ’ भन्ने कुख्यात अपराधी चाल्स शोभराजको भनाईलाई पछिल्लो सुन काण्डले पुष्टि गरेको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्किरीहरुका लागि ‘ट्रान्जिट’ बन्दै गएको छ । विदेश लैजादै गरेका लागु औषध र नेपाल भित्र्याउदै गरेका सुन पटक पटक बरामत गरिएको छ ।
अहिलेको सुन काण्डसँग सुरक्षा निकायभित्रै वर्तमान अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पनि नाम जोड्न थालिएको छ । भन्सारका कर्मचारीलाई कडा कारबाही नगर्नु, प्रमुख भन्सार प्रशासक सहसचिव नारायण सापकोटा अर्थमन्त्रीको नजिकको व्यक्तिका रुपमा विमानस्थलमा लगिनुले अर्थमन्त्री महराको नाम पनि जोडिएको छ । त्यसलाई चिर्न अर्थमन्त्री महरा नै अग्रसर हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी सुरक्षा संवेदशीलता हुनुपर्ने नेपालको विमानस्थल सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर रहेछ ? अहिले ठूलो प्रश्नका रुपमा अघि आएको छ ।
यति ठूलो संवेदशील विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदमा नै छलफल गरेर सरोकारवाला मन्त्रालयको विषेश सयन्त्र बन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो देखाएको पाइएन । जबसम्म विमानस्थलको सुरक्षामा खटिने अधिकारीहरुलाई कडा कारवाही गरिदैन तबसम्म विमानस्थलबाट हुने अवैध तस्किरी रोकिन सक्दैन ।
तस्करीको मूल जरो कहाँ छ ? त्यसलाई उलेख्न तत्काल लाग्नुपर्छ । अब सरकारले त्यसको रमिता हेरेर बस्नु हुँदैन । विमानस्थलमा रहेका सम्पूर्ण निकायमाथि छानबिन गरिनुपर्छ । छानविन र कारवाहीको निर्णय नगर्दा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि नागरिकले शंका गर्नु स्वभाविकै हो । विमानस्थलमा जडान गरिएका सबै सीसीटीभि हेरेर तत्काल तस्करका मतियारहरुलाई कारवाही गर्ने र सेटिङ भत्काउनेमा सरकारले गम्भिर निर्णय लिनुपर्छ ।